All posts tagged "Pyay"
The famous historical museums in Yangon
Yangon is full with many of ancient pagodas, historical buildings and museums. So this time, I would like...
Jovago | June 7, 2017
ဒီတစ်ကြီမ်မှာတော့ ကော်ဖီချစ်သူတွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့များစွာသော ကော်ဖီဆိုင်တွေထဲကမှ ဆိုင်အချို့ကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ရန်ကုန်ကော်ဖီဘတ်(စ်) ဘတ်(စ်)ကားပေါ်မှာ ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်သောက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် အခုသောက်လို့ရပြီနော်။ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှာ ဆန်းသစ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ရန်ကုန်ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်(စ်)က တကယ့်ဘတ်(စ်)ကားအစစ်ပေါ်မှာ ဖွင့်ထားတာဖြစ်လို့ဘတ်(စ်)ကား ပေါ်မှာ ကော်ဖီသောက်နေတဲ့...
Jovago | May 18, 2017
မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးနေထိုင်ကြပြီး တစ်မျိုးစီမှာ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံနဲ့ အစားသောက်ပုံစံတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ရန်ကုန်မြို့မှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ မတူညီတဲ့ အကောင်းဆုံးတိုင်းရင်းသား ရိုးရာအစားသောက်ဆိုင်တွေကို အစားသောက်ချစ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်...
Jovago | April 5, 2017
Guide to Katumadi (Taungoo)
About Taungoo Taungoo city is also known as Kaytumadi city. It is located in Bago region of Myanmar....